दोस्रो खोप्ले जगायको आसा : ८० वर्षीय वृद्ध हरिबहादुर क्षेत्री
काठमाडौँ, साउन २६ गते । थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ८० वर्षीय वृद्ध हरिबहादुर क्षेत्री सोमबार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन लामबद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०७७ साल फागुनमै कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाउनुभएको थियो । दोस्रो मात्रा लगाउने पर्खाइमा रहनुभएका उहाँ बल्लबल्ल खोप लगाउन पाउने आशामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पहिले त खोप लगाएर कोरोनाबाट बाँचिन्छ भन्ने सोच्नुभएको थिएन, पछि खोपले मात्र बच्न सकिने रहेछ भन्ने थाहा भइसकेपछि कोभिसिल्ड खोप लगाउनुभएको थियो ।
खोप लगाएर बाँचिन्छ भन्ने के आशा छ भन्ने प्रश्नमा क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “पहिले म मात्र होइन बाबु, सबैजना खोप लगाउन अन्योलमा थियौँ । के हो के हो भन्ने थियो तर विस्तारै बुझ्दै जाँदा खोप लगाइसकेपछि कोरोनाबाट मरिने रहेनछ भन्ने बुझियो ।अलि चाँडो खोप पाइन्छ भन्ने थियो भन्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो, “पहिलो मात्रा खोप लगाएको छ महिनापछि खोप लगाउन पाइयो ।” उहाँमा कोभिसिल्डबाहेकको खोप भए पनि एउटै फर्मुलाबाट बनेको हुनाले खोपले केही असर गर्छ कि भन्ने कुनै डर छैन
यस्तै शङ्खमूल बस्ने विष्णुकुमारी शर्मा ७७ वर्षको हुनुभयो । उहाँ पनि खोप लगाउन आतुर हुनुहुन्छ । “बाबु मलाई त छोराले खोप लगाउन ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाबाट बचिन्छ भन्ने मात्र थाहा छ ।” उहाँले खोप लगाइसकेपछि भने ढुक्क भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।यसअघि पनि आफू घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्किएको भन्दै उहाँले आफ्नै कोठामा टीभी जोडिदिएकाले सधैँ टीभी हेरेर बस्ने गरेको बताउनुभयो । कोरोनाबाट सधैँभरि धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको भन्ने सुन्दा उहाँलाई दिक्क लागेको छ । उहाँले छोराले कोरोनाबाट बचिन्छ भनेर खोप लगाउन ल्याएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले कोभिसिल्ड लगाएकाका लागि दोस्रो चरणको खोपमा उत्साहजनक ढङ्गले सहभागिता रहेको बताउनुभयो । डा. गौतमले हालसम्म सबै ठाउँमा कतिले खोप लगाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको भन्दै जुन ठाउँमा खोप अभियान सञ्चालन भएको छ, त्यहाँ खोप अभियान प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन भएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँले एस्ट्राजेनेका खोपको मिति छिट्टै सकिने बताउनुभयो । त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नमा भुटानबाट आएको खोपको मिति सकिन लागेको स्वीकार्दै उहाँले अगस्ट महिनाभरि त्यसको समय रहेकाले ढुक्कसँग लगाउँदा हुने बताउनुभयो।
भुटानबाट ल्याएको खोपको अवधि सकिन लागेकाले उपत्यकाबाहिर नपठाएको भन्दै उहाँले उक्त खोप उपत्यकामै खपत हुने जानकारी गराउनुभयो । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्ड लगाएका ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेको हो । भुटान र जापानबाट एस्ट्राजेनेका खोप आएपछि झन्डै छ महिनाअघि कोभिसिल्ड लगाएका ६५ वर्षमाथिका साढे नौ लाखसहित १३ लाख ६८ हजार व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा खोप दिइएको हो । डा. गौतमले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा कोभिसिल्ड लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्राका रूपमा एस्ट्राजेनेका दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत खोप गइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले पाँचवटा प्रदेशमा पाँच महिनाअघि पहिलो डोज लगाएकाको सङ्ख्यालाई पुग्ने गरी एस्ट्राजेनेका खोप पठाइएको उहाँको भनाइ छ । यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित कोभिसिल्ड निर्यातमा रोक लागेपछि दोस्रो डोज खोप लगाउनबाट लाखौँ मानिस वञ्चित भएका थिए । पछिल्लो समय भुटानबाट दुई लाख ३० हजार र जापानबाट कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत १६ लाख मात्रा खोप आएपछि दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले कोभिसिल्डको दोस्रो मात्राको एस्ट्राजेनेका खोप दिएको जानकारी दिनुभयो।
आजको गोरखा पत्रमा लेखिएको छ
२०७८ श्रावण २६, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 212 Views